होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न १८ सय देखि ९ हजारसम्म भाडा… – Khabar PatrikaNp
होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न १८ सय देखि ९ हजारसम्म भाडा…
६ भदौ, काठमाडौँ ।
सरकारले चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश आउने नागरिकलाई होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने व्यवस्थाका लागि होटलको सूची र दररेट सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी)ले विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई स्वेच्छाले होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले होटलहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ बमोजिम विमानस्थल हुुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र स्वेच्छाले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरुलाई राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले होटलहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो । पर्यटन विभागले उपलब्ध गराएको होटलको नाम र दररेटका आधारमा सूची तयार पारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ ।
सार्वजनिक भएको सूचीमा उपत्यका भित्र रहेका तारे होटल, पर्यटन होटल र साना तथा मझौला होटल गरी २ सय २० होटलमा कुल ३ हजार ५ सय बेड क्षमता रहेको छ । होटलको सूची सँगै होटलहरुमा बस्दा लाग्ने दररेट र खानाको मेनु समेत समावेस गरिएको छ । जसमध्ये पाँचतारे होटलमा एक्लै बस्दा ९ हजार रुपैयाँ र दुईजना साझेदारीमा बस्दा प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । चार तारे होटलका लागि एकजना बस्दा ८ हजार रुपैयाँ र दुईजना साझेदारीमा बस्दा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तीनतारे तथा डिलक्स रिसोर्टमा एकजना बस्दा ६ हजार रुपैयाँ र दुईजना साझेदारीमा बस्दा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई तारे होटल तथा स्टाण्डर्ड होटलका लागि एकल ५ हजार रुपैयाँ र दुई जना साझेदारीमा बस्दा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । एक तारे होटलमा एकल बस्दा ४ हजार रुपैयाँ र दुई जना साझेदारीमा बस्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पर्यटक स्तरको होटलमा एकजनाका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ र दुई जना साझेदारीमा बस्ने भएमा प्रति व्यक्ति १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै साना तथा मझौला होटलको दररेट पनि तोकिएको छ । साना तथा मझौला होटलमा एकल रुमका लागि १ हजार ८ सय रुपैयाँ र दुई जना साझेदारीमा बस्दा प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सबै होटलमा खाना र खाजा गरी दिनको चारपटक खान दिइने मेनु सार्वजनिक भएको छ । जसमा बिहानको खाजा, खाना, दिउसोको खाजा र साँझको खाना उपलब्ध हुने छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न सक्ने क्षमता भएका होटलहरुलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न सूचीकृत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ । आएसोलेटेड क्षेत्रमा भएका, कम्पाउण्ड भएका, बाहिरी व्यक्तिसँग घुलमिल हुन नसक्ने, भौतिक दूरी कायम गर्न सक्ने होटलहरु सूचीकरणमा परेका छन् । ठमेल, ताहचल, गौशला, बत्तिसपुतली, दरबारमार्ग, सानो गौचरन, नक्साल, भक्तपुर, लाजिम्पाट, गोदावारी, कमलादी, स्वयम्भू, झम्सीखेल, बूढानिलकण्ठ, लैनचौर, कमलपोखरी र बागबजार क्षेत्रमा रहेका होटलहरुलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।
Prevप्रहरीले जति खोजे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बम्जन ? आखिर कहाँ लुकेका छन् ? पुरा पढ्नुहोस
Next२ महिनाअघि निधन भएका सुशान्तको घर पुग्यो सीबीआई, धेरै प्रमाण जुटेको दावी
पुरानै मूल्यमा प्रशोधित पानीको बिक्री वितरण नभए तत्काल पक्राउ गरेर कालोबजारी मुद्दा दर्ता
आज विदेशबाट फर्किए ४३७ नेपाली !
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32762)